Akụkọ - Ndozi na mmezi kwa ụbọchị nke ndị na-anakọta uzuzu ụlọ ọrụ
Site na mmepe nke sayensị na teknụzụ na-aga n'ihu, a na-emepụta ọtụtụ ndị na-anakọta uzuzu uzuzu, n'etiti ndị na-anakọta uzuzu uzuzu ka a na-ejikarị nri, ciment, kemịkalụ, nhazi ígwè, ntụ ntụ pụrụ iche na mpaghara mmepụta ihe ndị ọzọ.Onye na-anakọta uzuzu uzuzu nke nzacha dị mfe imebi mgbe ejiri ya ogologo oge, ya mere nlekọta na nlekọta nke ihe nchịkọta uzuzu katrij dị mkpa karịsịa.
Anyị kwesịrị ime ihe ndị a:
(1) Kpebie oke uzuzu nke ihe eji eme ihe na-ekpochapu ma choputa usoro ntupu ash dika uzuzu nke usoro nbipu anakọtara.
(2) Kpebisie ike na okirikiri mmiri ozuzo dị ka nchịkọta mmiri dị na akpa ikuku nke ikuku mmiri na-ekewa n'ime usoro ikuku abịakọrọ.
(3) Lelee mgbe niile ma sistemu uzuzu uzuzu nke na-anakọta uzuzu na-afụkarị.Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe nkịtị, lekwasị anya na ịlele ma pulse valve diaphragm na valvụ solenoid adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ mebie, ma ekwesịrị ịrụzi ya ma ọ bụ dochie ya n'oge.
(4) Na-enyocha mgbe niile ma ọrụ nke akụrụngwa ọ bụ ihe nkịtị dịka mgbanwe na mgbanwe nke nguzogide ọrụ nke akụrụngwa.
(5) Na-enyocha mgbe niile iji ihe eji eyi uwe dịka ndepụta nke akụkụ ahụ si dị ma dochie ha n'oge.
(6) Na-agbakwunye mmanụ mmanụ mgbe niile na akụkụ ndị dị mkpa ka a na-ete mmanụ na akụrụngwa.Onye na-ebelata cycloidal pinwheel kwesịrị dochie 2 # sodium dabeere na griiz na gearbox kwa ọnwa isii, na ihe ndị na-ebu mmanụ kwesịrị iji griiz dabeere na 2 # lithium mejupụta otu ugboro n'izu.
(7) Na-enyocha mgbe niile ma onye na-ebugharị nrụgide dị iche nwere mgbochi ash, wee hichaa ya n'oge.
Ọ bụ nlekọta na nlekọta nke ndị na-anakọta uzuzu ụlọ ọrụ, enwere m olileanya inyere gị aka.
Electro-Magnetic Pulse Valve, Elektrostatik Precipitator, Electrostatic precipitator na-eji, Ihe nzacha akpa ụlọ ọrụ, Onye na-anakọta uzuzu simenti, Ihe nzacha ákwà mgbochi ikuku ikuku,